गण्डकी प्रदेशका सांसद टेकबहादुर घर्तीमगरको निधन ! – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ मंसिर २८ गते शुक्रबार ०७:२४ मा प्रकाशित
ताण्डव न्यूज, पाेखरा ः
गण्डकी प्रदेशका सांसद टेकबहादुर घर्तीमगरको नयाँ दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा निधन भएको छ।
सांसद घर्तीमगरलाई गएको मंगलबार उपचारार्थ भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। एयर एम्बुलेन्सबाट अपोलो अस्पताल पुर्‍याएर सांसद घर्तीमगरलाई अस्पतालको लिभर आइसीयुमा भर्ना गरिएको थियो।
बुधबार राति करिव १ बजे अस्पतालका डाक्टरहरूले उनको मृत्यु भएको घोषणा गरेको घर्तीमगरकी श्रीमती सुनमाया घर्तीले जानकारी दिइन्। प्रदेश सांसद घर्तीमगरको १७ दिनसम्म काठमाडौंस्थित ग्राण्डी अस्पतालको आइसीयुमा उपचार भएको थियो।
त्यहाँ निको नभएपछि उनलाई थप उपचारको लागि नयाँ दिल्लीको अपोलो अस्पताल लगिएको थियो। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका ५ अधिकारीचौर सइखोलाका सांसद घर्ती राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता थिए। उनी बागलुङ क्षेत्र २ को ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा बाम गठवन्धनबाट विजयी बनेका थिए। ४६ वर्षीय घर्ती केही दिनदेखि कलेजोसम्बन्धी रोगबाट पीडित रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ।
दशैँ तिहारका लागि कास्की प्रहरीकाे विशेष सुरक्षा योजना
सिर्जनाचोकमा रहेको मेनवारमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको ताला !
कार्यक्रममा एक घण्टा ढिलो पुगेर ‘रोज’ युनिटले भन्यो ‘फिल्मको विषयवस्तु सशक्त छ’
पोखरामा बढ्दै चोरी, ‘गौडाकोमुख’मा रहेको फेन्सी चोरीयो